Service - Mic Optoelectronic Co., Ltd
Power Sare ee ay hoggaaminayaan
LED SARE BAY Case
LED WADADA Light Case
LED FATAHAADDA Light Case
Case Light Tunnel
iftiinka LED Street
iftiinka C Taxanaha Street
laambad E Taxanaha Street
S iftiinka jidka taxane
All in mid ka mid qoraxda iftiinka jidka keentay
LED iftiin hadhuudh
ETL taxane laambad hadhuudh
laambad hadhuudh biyuhu
taxane Mini laambad hadhuudh
iftiinka LED Flood
A Taxanaha UFO bay sare iftiinka
C Taxanaha UFO High bay Light
D taxane UFO High Bay Light
taxane E UFO highbay light
Taxanaha L UFO Highbay light
M Taxanaha UFO Highbay Light
Hoggaamiyo Tunnel Light
taxanaha B hoggaamiyo Tunnel Light
taxane C hoggaamiyo Tunnel Light
Caagga LED Light
Waa maxay iftiin hadhuudh ah?
nidaamka Development iftiinka Street
Stadium xal iftiiminta
Maxay LED u taagan yihiin?
LED waa gaaban diode light-emitting.
Ilaa goormaad uu Kokes ku socon?
Kokes ku yihiin caan ah in ay alaabta aad u dheer-waarta. Kokes badan oo nolosha ah lagu qiimeeyo ilaa 50,000 oo saacadood. Tani waa qiyaastii 50 jeer ka dheer incandescent caadiga ah, 20-25 jeer ka dheer halogeen caadiga ah, iyo 8-10 jeer muddo ka badan caadiga ah CFL a. Waxaa loo adeegsaday 12 saacadood maalintii, 50,000 oo buro socon doono wax ka badan 11 sano. Waxaa loo adeegsaday 8 saacadood maalintii, in uu socon doono muddo 17 sano ah!
Xaggee loo isticmaali karaa uu Kokes?
Waxay waxaa loo isticmaali karaa meel kasta. bedelo LED horay ayaa diyaar u ah noocyada guluubka sida A-qaab, if-PAR, if MR, madaxtooyada, undercabinet, iyo in ka badan. Marka loo isticmaalo on dimmers, nidaamyo gaar dimming taageera nalalka badan, waxaan soo jeedinaynaa in jirrabaya a Kokes ugu horeeya si ay u tijaabiso waafaqsan.
Maxay yihiin faa'iidooyinka wareegaya LED?
Faa'iidooyinka wareegaya LED tiro badan yihiin. Halkan kaliya yihiin qaar ka mid ah faa'iidooyinka: Kokes ku isticmaalaan koronto badan ka yar nalalka kale, waxay leeyihiin mid aad nolosha dheer lagu qiimeeyo, ay soo saaraan kulaylka aad u yar, ma dhaadheer UV ama infrared, waxaa ku jira mercury lahayn, waa adkaysi u nixin iyo gariirka, iyo wax ku ool ah ugu shaqeyn karaan deegaan aad u qabow. Wixii macluumaad dheeraad ah faa'iidooyinka LED,
Maxaad Kokes ku kici badan noocyada kale ee nalalka? iyagu waa u qalantaa?
LED weli waa technology cusub, oo lid ku ah soo saara wax soo saarka oo tayo leh ayaa weli waa heer sare ah. Si kastaba ha ahaatee, binta ka soo degtay, u xuub-ka oo kaliya dhawr sano ka hor iyo qiimaha waxaa laga filayaa in ay sii wadaan in ay hoos u. In la eego haddii uu Kokes ku tahay qiimaha dheeraadka ah, waxaa fiican in aad eegto qiimaha ay ku shaqeeyaan guluubka ah ee intaa dheer in qiimaha kor-hore. kaydka tamarta ogaaday in inuu ku biiro LED ka dhigan tahay in qiimaha kor-hore dheeraad ah waxaa inta badan ku bixisay dib si deg deg ah halkii, oo waxaad dabaysha doonaa ilaa badbaadinayo lacag badan nolosha ee guluubka. Halkan waxaa ku qoran tusaale ah, waayo, qof macmiil ah oo la deggan yahay oo laga yaabo nuurka on xaq 10 saacadood toddobaadkii ñ bulshsada ay ka badan tahay 10 sano. Dhinaca kale, macmiil tafaariiqda ama makhaayad kuwa gubanaya siraaddo 90-100 saacadood toddobaadkii xisaabin doonaa ay bulshsada on a $ 70 LED PAR in ay ka yar 18 bilood. Qaadashada eegno qiyaasta ay bulshsada waa la hubaa in uu tixgelin ah marka la go'aaminayo haddii LED kugu habboon.
Ma jirtaa dhab ahaantii wax farqi ah oo u dhexeeya a $ 10 LED iyo a $ 50 LED?
Haa. Kokes ku waa mid aad la mid ah macaamiisha qalabka korontada iyo tayo dhab ahaantii muhiim. Si LED ah si fiican u shaqeyo iyo in la siiyo wax soo saarka iftiin la aqbali karo, oo dhan ka mid ah qaybaha waa in la dhisay si ay socon. Mar walba waa ay fikrad wanaagsan in la iibsado ka soo saaraha ah iyo tafaariiqle in aad ku kalsoon dambeeya sheyga taagnaan doonaan. Haddii aad jeceshahay inaad wax badan ka bartaan oo ku saabsan qaybaha iyo sida raqiis-dhigay uu Kokes ku leenahay ku kacay wax soo saarka oo tayo sare-,
Ma LED ah socday in ay soo saaraan iftiin ku filan si uu u bedelo guluubka aan hadda?
Codsiyada ugu, haa. Off-the-shelf waxyaabaha LED hadda kalsoonaan karo bedelay dhigma incandescent ilaa 100 watts, iyo waxyaabaha qaaska ah waxaa laga heli karaa si uu u bedelo wattages xataa sare.
Waa maxay tayada LED iftiinka?
Haddii aad soo iibsato alaabta oo tayo leh, tayada iftiin fiican. Color haya'ad Index (CRI) waxaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu cabbiro tayada iftiin on scale ka 1-100. Kokes badankood waxay leeyihiin rating CRI oo ugu yaraan 80 ah, oo kuwo badan baa loo qiimeeyo 90 iyo wixii ka sareeya.
Sidee cagaaran waa uu Kokes?
Kokes ku waa mid aad u cagaaran. Bilow, waxay isticmaalaan koronto badan ka yar alaabooyin badan oo nalalka kale. Taas macnaheedu waxa weeye in korontada ka yar waa in la soo saaray si ay u shaqeeyaan, oo keentay in qiiqa hoose ka Quwadda, gaar ahaan meelaha dhirta dhuxusha-rideen waa wax caadi ah. Si ka duwan CFLs, waxay ka kooban mercury lahayn. Sababta oo ah cimri dheer, waxay sidoo kale yareeyo qashinka adkaha ah: Haddii aad bedeli guluubka incandescent la LED ah, waxaad ka hortagi doonaan konton 1,000 nalalka saacad incandescent ka la tuuraa. Intaa waxaa dheer, waxay soo saaraan kulaylka aad u yar oo uu yarayn karaa isticmaalka tamarta la xiriira HVAC. US Department of Energy ayaa lagu qiyaasaa in la ansaxiyo kordhay ee uu Kokes ka badan 15 sano ee soo socda ayaa sidoo kale yareyn lahaa baahida loo qabo korontada ka nalalka by boqolkiiba 62, hortago 258 million oo metric tons of kaarboonka, oo la baabi'iyo baahida loo qabo 133 Quwadda cusub.
Kokes loo isticmaali karaa dimmers?
Sida caadiga ah, haa. Kokes badan ayaa si gaar ah ku qoran sida isagoo LEDka. nidaamyada dimming Qaar ka mid ah la Kokes ku fiican yihiin kuwa kale shaqayn, sidaas darteed waxaa ugu wanaagsan in aad tijaabiso hal ama laba ka hor si buuxda dib-u-lamping meel.
Waa in uu Kokes oo lagu isticmaalo kulan ku lifaaqan?
Ma aha haddii ay gabi ahaanba waxaa ku lifaaqan. Si LED ah in ay si sax ah u shaqeeyaan, waa in ay noqon kulankii a non-ku lifaaqan si allo
Cinwaankaaga: dabaqa 3aad, D dhismaha, 12 # Jinyuan wadada ugu horeysay, Heao, Henggang, degmada Longgang, Shenzhen, Shiinaha
Phone: + 86-755-89313334
daad MIC 720w lignting for stadi Austria ...
© Copyright - 2010-2018: Rights Reserved All. shirkii PCB